2GB OST Dhibaatada Faylka. Weyn OST Dhibaatada Faylka.
Bogga ugu weyn Products DataNumen Exchange Recovery Adkeysey OST Dhibaatada Faylka
Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan Weyn OST Dhibaatada Faylka
Maxaa Ka Weyn OST Dhibaatada Faylka?
Microsoft Outlook 2002 iyo noocyada hoose ayaa xaddidaya cabirka galka khad la'aanta ah (OST) faylka illaa 2GB. Marka feylku gaaro ama dhaafo xadkaas, waxaad la kulmi doontaa mid ama in ka badan oo ka mid ah khaladaadka soo socda:
Lama furi karo ama lama shubi karo OST gabi ahaanba
Kuma dari karo wax xog ah cusub OST gudbiso.
Lama waafajin karo OST ku fayl garee serverka Sarrifka.
Eeg fariimaha khaladaadka kala duwan inta lagu gudajiro nidaamka iskudhafka.
Tan waxaa loo yaqaan 'oversized' OST dhibaatada faylka.
Microsoft Outlook iyo Exchange isuma laha waxqabadyo dhismo ah si ay u badbaadiyaan kuwa waaweyn OST faylka Microsoft kaliya waxay sii deysay xirmooyin badan oo adeeg ah si marka OST cabirka faylka wuxuu kudhowyahay xadka 2GB, Muuqaalka wuxuu soo bandhigi doonaa fariimo qalad ah wuxuuna joojinayaa aqbalaada wixii xog cusub ah. Farsamadan, illaa xad, ayaa ka hortagi karta OST faylka ka weynaan Laakiin marka xadka la gaaro, si dhib ah ayaad wax kula qaban kartaa OST faylka, sida dirista / helitaanka emaylka, ballamo samee, qor qoraal, iswaafajin, iwm, illaa aad ka saarto xogta badan OST xareyso oo xirxiro intaas ka dib si aad u yareyso cabirkeeda oo ka yar 2GB. Tani waa mid aad u dhib badan marka xogta ku jirta OST faylku wuu sii weynaadaa oo ka sii weynaadaa.
Tan iyo Microsoft Outlook 2003, cusub OST qaab feyl ayaa la soo saaray, kaas oo taageera Unicode oo aan lahayn xaddiga cabbirka 2GB wixii intaa ka badan. Sidaa darteed, haddii aad isticmaaleyso Microsoft Outlook 2003 iyo noocyo ka sarreeya, iyo OST faylka waxaa lagu abuuray qaabka cusub ee Unicode, markaa uma baahnid inaad ka walwasho dhibaatada weyn.
1. Markaad isku daydo inaad rarto xajmi weyn OST faylka, waxaad arki doontaa fariimo qalad ah, sida:
Khaladaad ayaa lagu ogaaday feylka xxxx.ost. Jooji dhammaan codsiyada ku shaqeeya boostada, ka dibna isticmaal Qalabka Dayactirka Sanduuqa.
aaway 'xxxx.ostwaa magaca OST faylka la rakibayo
2. Markaad isku daydo inaad ku darto fariimo cusub ama waxyaabo kale OST faylka, iswaafajinta ama hawlgallada kale, iyo inta hawshu socoto, OST Faylka wuxuu gaarayaa ama dhaafaa 2GB, waxaad ka heli doontaa Muuqaalka oo kaliya inuu joojiyo aqbalaada xog kasta oo cusub cabasho la'aan, ama waxaad arki doontaa fariimo qalad ah, sida:
Task 'Microsoft Exchange Server' ayaa la soo sheegay khalad (0x00040820): 'Khaladaadka ku jira iswaafajinta asalka. In most kiisaska, macluumaad dheeri ah ayaa lagu heli karaa diiwaanka iskuduwaha galka sheyada la tirtiray. '
Khaladaadka iswaafajinta asalka. In most kiisaska, macluumaad dheeri ah ayaa laga heli karaa log-ka-habeynta galka sheyga la tirtiray.
Nuqul kama dhigi karo sheyga.
Sida aan kor ku soo sheegnay, Microsoft ma haysato hab lagu qanco oo lagu xalliyo waxyaabaha waaweyn OST dhibaatada faylka. Xalka ugu fiican waa sheygayaga DataNumen Exchange Recovery. Waxay soo kaban kartaa baaxadda weyn OST faylka si fudud oo hufan. Si tan loo sameeyo, waxaa jira laba habab oo kale:
Haddii aad leedahay Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya oo lagu rakibay kombuyuutarkaaga maxalliga ah, markaa waad awoodi kartaa badalo ka weyn OST fayl u gal feyl PST ah qaabka cusub ee muuqaalka 'unicode' ee Muuqaalka 2003, taas oo aan lahayn xadka 2GB wixii intaa ka badan. Tani waa habka la doorbido.
Haddii aad kaliya haysatid Muuqaalka 2002 ama noocyo hoose oo rakibmay, markaa waad awoodi kartaa qaybi xajmiga weyn OST fayl u gal dhowr faylal yaryar oo PST ah. Fayl kasta oo PST ah wuxuu ka kooban yahay qayb ka mid ah xogta asalka ah OST faylka, laakiin waa in ka yar 2GB oo midba midka kale wuu ka madax bannaan yahay si aad si gooni gooni ah ugu heli kartid Muuqaalka 2002 ama noocyada hoose. Habkani waa wax yar oo aan habooneyn maadaama aad u baahan tahay inaad maamusho faylal badan oo PST ah ka dib hawlgalka kala qaybinta. Oo waxaad wali ubaahantahay inaad wajahdo madax xanuunka madaxbannaan ee weyn marka fayl kasta oo PST ah uu gaaro 2GB goor dambe.